မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel သည် သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး သည့်သတင်း
နေပြည်တော် ၊ ၇-၆-၂၀၁၈
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့ ၇.၆.၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ (၁၁:၀၀)နာရီ တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
ဇီဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု ပူးပေါင်းရေးဆိုင်ရာ ကိုရီးယား-မြန်မာ ဒုတိယဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်သတင်း
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားဇီဝအရင်းအမြစ်များ သိပ္ပံဌာန (National Institute of Biological Resources-NIBR) တို့ပူးပေါင်း၍ မြန်မာ-ကိုရီးယား တတိယအကြိမ်မြောက် ဇီဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု ပူးပေါင်းရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယဝန်ကြီးအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲကို (၆-၆-၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၃၀)နာရီ အချိန်၌ Grand Amara Hotel၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသည်။
သစ်အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် တန်ဘိုးမြှင့် ကုန်ချောများ ထုတ်လုပ်သွားနိုင်ရေး ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းမှာကြား
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် မေ ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမပေါ်ရှိ မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲခန်းမ အဆောက်အဦသို့ ရောက်ရှိပြီး မြေညီထပ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကျောက်မျက်ရတနာ အရောင်းဆိုင် များအား စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ပထမထပ်ရှိ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ခန်းမ၊ တတိယထပ်ရှိ သင်တန်းခန်းမနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းရုံးခန်းတို့အား စစ်ဆေးကြည့်ရှု့ခဲ့ပြီး အသင်းအစည်းအဝေး ခန်းမတွင် တာဝန်ရှိသူများအား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှာကြားသည်။
နော်ဝေ - မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်၏ တတိယအကြိမ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ပြည်သူ့အတွက် ဒုတိယ(၁)နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ
ပြည်သူ့အတွက် ဒုတိယ(၁)နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာ ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သယံဇာတ နှင့် သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနတို့၏ သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။
သစ်တောမြေနှင့် အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ မြှင့်တင်ရေး ဒုတိယ အကြိမ် အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း တက်ရောက်
သစ်တောမြေနှင့် အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ မြှင့်တင်ရေး ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်ရှိ Hotel Max တွင် ၂၂-၅-၂၀၁၈ နေ့ ၊ နံနက်(၉)နာရီ ၌ ကျင်းပသည်။
ရန်ကုန်မြို့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. K.W.N.D Karunaratne မှ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်သတင်း
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် ရန်ကုန်မြို့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. K.W.N.D Karunaratne အား ၂၂-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
China Huaneng Group Co.,Ltd. မှ Chairman ဖြစ်သူ Mr. Yuan Xianghua ဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်သတင်း
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား China Huaneng Group Co.,Ltd. မှ Chairman ဖြစ်သူ Mr. Yuan Xianghua ဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ ယနေ့ ၉-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၂၈)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း သတ္ထုသန့်စင်စက်ရုံများ၊ သစ်တော စိုက်ခင်းများ၊ ဆင်စခန်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် မေ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၊ သယံဇာတနှင့် သဘာပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်သစ်တော ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အတူ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ တောင်လေးလုံး ကြိုးဝိုင်း၊ အကွက်အမှတ်(၃၀)အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (၁၀)နှစ် စီမံကိန်းအရ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တောင်ယာမီးရှို့ခြင်း မရှိသော Zero Burning Technique ဖြင့် စိုက်ပျိုး တည်ထောင်မည့် ၁/၂၀၁၈ စီးပွားရေး ထင်းရှူးစိုက်ခင်း (၅၀)ဧကစိုက်ခင်း တည်ထောင်ရန် ပြင်ဆင်နေမှုများအား စစ်ဆေးကြည့်ရှုသည်။